Sexcam ကုထုံး - စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသောအသုံးပြုသူများကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ကုသမှုပေးသော cam site ၏ (၂၀၁၉၉) ။ David Ley သည်သူတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်သော Your Brain On Porn အား xHamster မှလျော်ကြေးပေးသည်
Sexcam ကုထုံး: စိုးရိမ်စိတ်ရှိသူများ (2019) အားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်စိတ်ကုထုံးကိုကမ်းလှမ်းသည့် cam site ၏အတွင်းပိုင်း။ ဒေးဗစ်လေသည်၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမြှင့်တင်ရန် xHamster မှလျော်ကြေးပေးသည်
အန်ဒီဂျုံးစ်, 16 စက်တင်ဘာ 2019 (ဆောင်းပါး Link ကို)
Stripchat ၏ sexcam ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏မူလမြင်ကွင်းသည်ပန်းရောင်၊ ရွေ့လျားနေသောအသားများဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင်စတုရန်းတစ်ခုစီသည်တစ်ပိုင်းတစ်စအဝတ်အချည်းစည်းရှိသောအနုပညာရှင်တစ် ဦး ၏မျက်နှာနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုတပ်ဆင်ထားပြီးသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဗီဒီယိုလောကတွင်ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်လာသည်။
ဆံပင်မှောင်မိုက်တဲ့ကျောင်းကိုသင်ပေးပါ"Pulp Fiction ခေတ်မှ Uma Thurman bob နှင့်အတူသွေးဆောင်သူသည်ငှက်ပျောကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလည်ပတ်စေသည်။ MilkyFetishMegan သည်ကြီးမားသောမျက်နှာသွင်ပြင်မရှိ၊ ခေါင်းကိုက်။ ရင်သားမရှိ၊ မျက်ခုံးများကဲ့သို့မျက်နှာပြင်မှငေးကြည့်နေသည်။ GingerSnaps သည်မစုံလင်သောစုံတွဲတစ်တွဲ (အနိုင်ရရှိခဲ့သည် မသိ များအတွက်ဆု"အကောင်းဆုံး Cam စုံတွဲ၊ 2019"), အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ငါဗီဒီယိုနှင့်ဘုရင်မကြီးသို့ကလစ်နှိပ်ပါ Love မှတစ်စုံတစ်ယောက် နောက်ခံကစားသည်။ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူအားလုံးသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိသူတို့၏အိပ်ခန်းများမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေကြသည်။
ဒါဟာမဆုတ်မနစ်သောပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှ လွဲ၍ မဆုတ်မနစ်ဇွဲပြသသည့်ပြပွဲဖြစ်သည်။ ထိုတွင်အမျိုးသားတစ် ဦး သည်နေသာသောနောက်ခံရှေ့တွင်အပြာရောင်လည်ပင်းပွင့်သောရှပ်အင်္ကျီတွင်အမှတ်တမဲ့နေရာယူထားသည်။ သူ့ကို နှိပ်၍ သင် Stripchat မှငှားရမ်းထားသောစိတ်ရောဂါကုထုံးဆရာဒေါက်တာဒေးဗစ်လဲ့နှင့် site တစ်ခုအသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အုပ်စုလိုက်ကုထုံးသင်ခန်းစာများကိုကမ်းလှမ်းရန်နှင့်သင်စကားပြောပါ။
Stripchat ၏ဖောက်သည်များစိုးရိမ်သောကြောင့်သူရောက်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ site ကိုမကြာသေးမီက၏စစ်တမ်းတစ်ခုထွက်သယ်ဆောင် 6,000 အသုံးပြုသူအများစုမှာအမျိုးသားများဖြစ်သည် 18 - 24။ အဲဒါကိုတွေ့ပြီ 11% စိုးရိမ်ပါသည်"Webcam တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်။ အမှန်မှာ၊ site သည်သုံးစွဲသူများ၏မေးမြန်းမှုများ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။"တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ပါသလော။ ” ရန်၊"ငါ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုငါလိမ်နေတာလား” နှင့်စိုးရိမ်စရာ:"ငါစစ်မှန်တဲ့ဆက်ဆံရေးများအတွက်ပျက်စီးပြီလား " ဤအတောအတွင်းတုန်လှုပ်စေသော 40% သူတို့အဆိုတော်နှင့်အတူချစ်ကြပြီဟုဆိုသည်။
ညစ်ညမ်းသောကမ္ဘာတွင်များသောအားဖြင့်မမြင်ရသောလူမှုရေးသိစိတ်သည်အတိုင်းအတာနှင့်ပြနာများကိုဖြေရှင်းရန်သူတို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဒေါက်တာ Ley သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိနေသနည်း လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား.
Ley က Stripchat သည် Sexual Health Alliance နှင့်အတူသူ့အားချဉ်းကပ်ခဲ့သည်၊"ပုံမှန် sexcam အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်ပြissuesနာများကိုကိုင်တွယ်ရန်အရှက်မရှိ၊ ကျန်းမာသောနည်းလမ်းများ။ မေးခွန်းမှာအွန်လိုင်းအကြံပေးမှု၏တိုတောင်းသောအစီအစဉ်သည်၎င်းတို့သည် porn နှင့် cam မိန်းကလေးများအားစွဲလမ်းသည်ဟုထင်မြင်သူအားအမှန်တကယ်ကူညီနိုင်ပါသလား။
ပွင့်လင်းသောတံခါးဖွင့်ချိန်တစ်ခုတွင်သူသည်အသုံးပြုသူရာပေါင်းများစွာထံရောက်သွားပြီး၊ အခြားပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့သင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့်သင်ဒေါက်တာ Ley ကိုမေးခွန်းများမေးနိုင်သည်။ တချို့ကလှောင်ပြောင်နေကြတယ် (အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က Ley နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်"ဒါပေမယ့်အများစုကတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစိုးရိမ်ကြတယ်။ "sexy webcams ကိုတစ်နေ့လေးနာရီသုံးတာလား။ အသုံးပြုသူတစ် ဦး အားမေးမြန်းသည်။ ဒေါက်တာ Ley ကမထင်ထားဘူး"သငျသညျစောင့်ကြည့်တစ်နေ့လျှင်ငါးနာရီကြာလျှင် TVသင်သည်စွဲလမ်းနေမည်ကိုသင်စိုးရိမ်ပါလိမ့်မည် TV?" သူကမေးတယ်။
တကယ်တော့, အနည်းငယ်ကွာခြားနှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ကမ်းလှမ်းဒေါက်တာ Ley ကြောင်းစောဒကတက်သည်"သင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဟုခံစားရခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်မထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ သင်က roller coaster အပေါ်ထိန်းချုပ်မှုမရှိဟုခံစားရနိုင်သော်လည်းသင်အားလုံးသည်အပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအဖြေများမှ၎င်းသည်ဟုတ်မဟုတ်သိရန်ခဲယဉ်းသည်"ကုထုံး” သည်ကြီးလေးသောအကူအညီကိုပေးဖို့သို့မဟုတ်လူများကိုထို site ပေါ်တွင်ထားရန်အလွန်အစစ်အမှန်ကြောက်ရွံ့မှုများကိုနှုတ်ဖြင့်အင်္ဂတေ ထား၍ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ၀ မ်းသာအားရတစ်ရာခြင်းရဲ့ဆူညံသံကိုနစ်မြှုပ်ပစ်လိုက်ခြင်းဟာမဆုတ်မနစ်သောငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ဖျော်ဖြေသူများကို ၀ င်ရောက်မှုကိုဆက်သွယ်မှုအားဖြင့်သင့်အားအားပေးသော interface တစ်ခုမှတဆင့်ကြားဝင်ဖြန်ဖြေသည်။ မည်သည့်စျေးကြီးသောဘားတွင်မဆိုဤတွင်ငွေအသံသည် ပို၍ ကျယ်လောင်နေသည်။ သုံးစွဲသူများသည်တိုကင်များကိုအထုပ်များဖြင့်ဝယ်သည် - ဆိုလိုသည်မှာ 90 $ များအတွက်တိုကင်9.99, 2255 $ များအတွက်တိုကင်199.99 - နှင့်သုံးစွဲတိုကင်သည်ကျယ်လာသည်"ping” မြင်ကွင်းပေါ်တွင်သူတို့ကိုရွေးချယ်ထားသောဖျော်ဖြေသူနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ပင်တဂွန်တစ်ခုတည်းအတွက်ဒေါ်လာသုံးစွဲရန်အတွက်၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကိစ္စမဟုတ်ဟုဆိုခဲ့သည်10,000 sexcams အပေါ်တစ်လ။ ထိုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်သုံးစွဲသူများအား log out လုပ်ရန်ပြောသည့်ကုထုံးဆရာတစ် ဦး ကိုငှားရန်သူတို့၏စီးပွားရေးမော်ဒယ်ကိုများစွာနားလည်မှုမရှိပါ။
ဘယ်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်နိုင်သည်အချို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ နယ်ပယ်တွင်ပြPaနာတစ်ခုမှကင်းလွတ်ပြီးလိင်ဆိုင်ရာလိင်စိတ်နှင့်လိင်စွဲသူများအားပါလာလာဟောလ် Laurel စင်တာ sexcam စွဲသူများသည်သူမ၏ထံအကူအညီတောင်းခံလာသည့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအရေအတွက်ပိုများလာသည်ဟုဆိုသည်။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းသည်ရိုးရှင်းသော၊ အခမဲ့လေကြောင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများထက် ပို၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်နွယ်မှုရှိသည်ဟူသောစိတ်ကူးကိုစွဲလမ်းသွားသည်ဟုသူမကဆိုသည်။
"လူတွေဟာသူတို့ရည်ရွယ်တာထက်ပိုပြီးအချိန်တွေ၊ ပိုက်ဆံတွေစသုံးနေကြတယ်။ "သူတို့ကထပ်တူ dopamine ထိခိုက်မှုကိုဆက်ပြီးလိုက်ကြသည်။ သူတို့သည်ချစ်ရသူများနှင့်အချိန်မဖြုန်းကြောင်းသတိပြုမိလာသည်သို့မဟုတ်ကလပ်များမှထိုနေရာများတွင်အချိန်ပိုပေးရန်စောစောစီးစီးထွက်ခွာသွားကြသည်။ ထို့နောက်သူတို့သည်အလုပ်ခွင်တွင်အသုံးပြုရန်ဆွဲငင်အားခံရနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းတို့ကိုအလုပ်ကွန်ပျူတာဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဒါကသူတို့ဘဝကိုအဆုံးသတ်စေနိုင်ပြီးလူတွေကအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တာကိုငါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် 38အသက် ၅ နှစ်အရွယ် Andrew Barnbrook သည်သူ၏အလုပ်ရှင်ကိုပင်ပေါလု၏လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကိုတောင်ခံခဲ့ရသည်250k သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့် camming အားမိမိစွဲငွေကြေးထောက်ပံ့ဖို့အမိန့်။
အဖြစ်မှန်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကြားရှိမျဉ်းကြောင်းများသည်မှုန်ဝါးလာနိုင်သည်ကိုနားလည်နိုင်ပါသည်။ Stripchat ပွဲတစ်ခုစီသည်ကြည့်ရှုသူအားဖျော်ဖြေသူတစ် ဦး ၏ကမ္ဘာသို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးသည်။ အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲသူတို့အခန်းထဲရောက်နေတယ်၊ ​​တိတ်တိတ်လေးပြောလိုက်ရင်မင်းဟာရက်စွဲတစ်ခုပြီးတဲ့နောက်သူတို့နေရာသို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်အရင့်အရင့်ဖြစ်သော်လည်းအသေးစိတ်တိုင်းသည်သင့်ကိုနောက်ထပ်ဆွဲဆောင်ရန်စွမ်းအားရှိသည်။ နောက်ခံရှိဗလာစာရွက်ပေါ်တွင်ပါ ၀ င်သောကြွေးကြော်သံ၊ မတိုက်ဆိုင်သည့်ခေါင်းအုံးနှင့်ကူထူအစုံ၊ ညာဘက်တင်ပါးပေါ်မှတက်တူးထိုးထားသည်။ KirstieVegas သည်ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ camming အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီဆံပင်တစ်ချောင်းတွင် Captain America ခေါင်းအုံးတစ်ခုရှိသည်။ သူမသည် Captain America ကိုချစ်သောကြောင့် (သို့) Marvel ရုပ်ရှင်ကားများသည်ယောက်ျားများကိုစကားပြောရန်အဆင်ပြေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုသူတို့က chat ဖို့ကိုချစ်။ ယဉ်ကျေးသောအသွင်အပြင်ရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများမှစက်သေနတ်လျင်မြန်စွာဖြင့်ဖျော်ဖြေသူများအားအသုံးပြုသူမေးခွန်းများသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။"ကျေးဇူးပြုပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေဖို့ပြောပါ။"အဘယ်အရပ်ကလာသနည်းဟုမေးသော်၊"ကစားတယ် ရေနံပေါင်းတင်?” - မှန်တယ်တောင်းဆိုချက်များကိုရန် -"သင်အမှန်တကယ် cumming လား? "နှင့်"မင်း squirt လို့ရမလား? (ဒီနောက်ဆုံးမေးခွန်းကငါရိုက်ထည့်သည့် chatroom တိုင်းတွင်ဖြစ်သည်)
"ဒါဟာ [sexcam] ဟာချိန်းတွေ့တာထက်ပိုကောင်းတယ်။ ငြင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူး၊ ဂိမ်းလည်းမရှိဘူး။ မင်းက sexy မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်ခဲ့ရင်မင်းလိင်ဆက်ဆံမယ်"
Stripchat ၏ဖျော်ဖြေသူများသည်၎င်းတို့၏ပရိသတ်များကိုစိတ်စွဲလမ်းမှုမဖြစ်အောင်တားဆီးရန်ခြေလှမ်းများစတင်လှမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ "ငါချိန်းတွေ့တာကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးဆိုတာကိုသုံးစွဲသူတွေသိစေပြီးနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ပေးတယ်” ဟု Melrose Strip ကပြောကြားခဲ့သည်။ 26၏ cam မိန်းကလေး3နှစ်ပေါင်း။ သူမသည်ထုတ်လွှင့်နိုင် 1000 အသုံးပြုသူများသည်တစ်ပတ်လျှင်လေးကြိမ်ရှိပြီးသူမအနေဖြင့်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောယောက်ျားများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မကောင်းသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရှောင်ရှားခြင်းအကြားတင်းကျပ်သောကြိုးဖြင့်လမ်းလျှောက်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Darnell *, 27ကင်မရာဆိုက်များကိုနှစ်နှစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါသူ့ကိုဖိုရမ်၏ sexcam ဝန်ခံချက်ချည်ပေါ်မှာရှာပါ"NoFapp” - ယောက်ျားများသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခိုင်မာသည့်ရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကိုအချင်းချင်းတိုင်ပင်သည့်ညစ်ညမ်းမှုဆန့်ကျင်ရေးဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ NoFapp တွင်လည်းဇနီးမယားများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များသည်သူတို့၏အဖော်အဖက်အားလိင်စွဲလမ်းမှုမှလွတ်မြောက်ရန်သို့မဟုတ် ၄ င်း၏အကျိုးဆက်များကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားနေသူများဖြစ်သည်။ Darnell သည်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့မဟုတ်မိသားစုသည်သူသည်ညနေခင်းတွင်မည်မျှအသုံးပြုသည်ကိုသိလိမ့်မည်ကိုကြောက်သည်။
သူကသူ့ sexcam အသုံးပြုမှုကို Pornhub မှထွက်လာသည်ဟုဆိုသည် "ဒါကငါ့တံခါးပေါက်မူးယစ်ဆေးပဲ "ဟုသူကအီးမေးလ်ကိုကျော်ကပြောပါတယ်။ သူသည်ရုရှား cam မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုအခမဲ့ဝေဟင်မှညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့ပျင်းစိုက်ပျိုးတော်မူပြီးမှ 6 - 7 သူမရရှိနိုင်သောဗွီဒီယိုများ၊ Darnell သည်ပိုမိုရှာဖွေမှုကိုစတင်ခဲ့ပြီးအခကြေးငွေပေးသည့် sexcam site ပေါ်တွင်သူမ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်ကိုဖြတ်ကျော်မိသွားသည်။ ဒါကသူမအတွက်သူ့အတွက်အမှန်တကယ်စကားပြောခွင့်ရတာပဲလို့သူကပြောပါတယ်။
"ငါသူနဲ့စကားစမြည်ပြောနေတဲ့တခြားယောက်ျားတွေထက်ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်” ဟုသူကပြောသည်။"ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့"မင်းပြုံးရင်မင်းရဲ့ချိုင့်တွေကအရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ ” ဒါမှမဟုတ်သူမကိုအရင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုမှာသူမဖွင့်ပြခဲ့တဲ့ R'n'B လမ်းကြောင်းအကြောင်းမေးချင်ပါတယ်။ သူမသည်တကယ်ကောင်းစွာတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ငါကျောင်းမှာပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးအနိုင်ရချင်သလိုခံစားရတယ်
လူတိုင်းအတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အခြေခံညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းထက်ဒီသစ်ခွံအသစ်ဟာပိုမိုသန့်စင်တယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။ သူကပိုပြီးစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးလာတယ်။ သူသည် Shazam ကိုသူ၏ cam မိန်းကလေးကသူမ၏လိင်၌ကစားမည့်လမ်းကြောင်းအားလုံးကိုပြသပြီး၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမနှင့်စကားပြောနိုင်ပြီးဒေါ်လာဘီလ်များလျင်မြန်စွာတက်နေခဲ့သည်။40 - 50 သူမ၏ရှိုးအပေါ်တစ်ပါတ်။
​"ချိန်းတွေ့တာထက်ပိုကောင်းတယ်” ဟုသူကဆိုသည်။ "အဘယ်သူမျှမငြင်းပယ်ခံရခြင်းမရှိဂိမ်းရှိခဲ့သည်။ သင်သည် sexy မိန်းကလေးနှင့်စကားပြောပြီးနောက်သင်လိင်ရလိမ့်မည်။ သူမရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုကြည့်ပြီးသူမဘယ်လိုရုန်းထွက်နေသည်ကိုကြည့်သည်။ သို့သော်အခြားသူများကသူမကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးသည့်အခါသူမမှာတော်တော်လေး pussy ရှိနေသည်ဟုတွေးမိသည်။ သူတို့လည်းသူမကိုလိုချင်ခဲ့တယ်ငါဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။
Darnell သည်အခြား cam မိန်းကလေးများနှင့်လည်းဘွဲ့ရခဲ့သော်လည်းသူ၏အသုံးပြုမှုကိုနှေးကွေးစေလိုသည်။ "ငါဒေါ်လာဖြုန်းပါတယ်400 တစ်လနှင့်ကော်ဖီအနက်ရောင်ကိုသောက်သုံးခြင်းဖြင့်သူတို့နှင့်စကားပြောရန်၊ သူတို့အားလုံးပျော်ရွှင်စေရန်။ ငါကိုချစ်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမုန်း
ဒေါက်တာ Ley ကို Stripchat ပြတင်းပေါက်ကကြည့်နေစဉ်ငါ Darnell အကြောင်းစဉ်းစားသည်။ သူက porn ကိုစွဲလမ်းစေသောသက်သေအထောက်အထားမရှိ, သင်သုတ်ရည်လွှတ်အမှန်တကယ်အကြံပြုလိုတယ်သောအကပြောပါတယ် 21 သင်၏ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက်တစ်လတစ်ကြိမ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုရန်စိုးရိမ်နေပါကအွန်လိုင်းလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်အလွန်အကျွံသုံးစွဲနေသည်ဟုသင်ယူဆသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုသာပြုလုပ်သင့်သည်"သင်၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည်သင်၏ညစ်ညမ်းမှုကိုလျှော့ချမည့်အစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြissuesနာများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ဆက်နွယ်မှုမဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ရှက်ရွံ့နေသောလူ့အဖွဲ့အစည်းမှမဟုတ်ဘဲသူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုသူကဆိုသည်။